I-Zuora: Zenzekelayo ukuThumela kwakhona ukuBhatala kunye nokuBhaliswa kokuSebenza | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 11, 2017 Douglas Karr
Iinkampani zophuhliso lwesicelo zichitha itoni yexesha ekuphuhliseni amaqonga azo kodwa zihlala ziphoswa yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu eziyimfuneko kwimpumelelo- ulawulo lomrhumo. Kwaye ayongxaki elula. Phakathi kwamasango okuhlawula, ukubuya, iikhredithi, izaphulelo, ixesha lesiboniso, iipakeji, ukwenza ilizwe jikelele, ukurhafisa… ukuhlawulwa okuphindaphindayo kunokuba yinto enzima.
Njengayo nayiphi na into, kukho iqonga layo. Zuora. Ukuhlawulwa rhoqo kwe-Zuora kunye noLawulo lobhaliso kuyenza isebenze inkqubo yakho, nokuba iphindaphindeka, ngokusetyenziswa, ukuhonjiswa, okanye ukubuyela umva.
I-Zuora yokuRhola iiRhafu eBhangayo kunye neZinto zoLawulo lokuBhaliswa zibandakanya
Ukuhlawula kwakhona - Ukukhawulezisa imisebenzi yamatyala ngaphandle kokulahlekelwa ziinkcukacha. Iqela labathengi ngokudibeneyo kwaye usete iishedyuli zokuhlawula kunye nemithetho yeqela ngalinye.
Ukukhuthazwa kunye nokubala Ngalo lonke ixesha umthengi ephucula, ehla ezantsi okanye etshintsha umrhumo, ityala liyachaphazeleka. UZuora ulawula ngokuzenzekelayo ezi zinto zivelisayo kunye nezibalo ukuze ungabi yibhotile.
Irhafu yexesha langempela -Usebenzisa i-injini yerhafu yeZuora okanye udibanise nesisombululo somntu wesithathu ukutsala ubalo lwerhafu yokwenyani kuyo yonke i-invoice.
Itemplate ye-invoyisi -Sebenzisa uluhlu olubanzi lweetemplate ze-invoyisi ezinje ngokudibanisa amaqela, ii-subtotals, kunye nemeko ethile yokuma koyilo kunye nokumisela iitemplate ze-invoice eZuora.
Ukuhlawuliswa kweZuora kunikezela ngento eguquguqukayo, kubandakanya ukubhatala abathengi ngenyanga, ngekota, ngonyaka, okanye naliphi na elinye ixesha. Ungaqala umrhumo xa kunikezelwa ngenkonzo, xa umthengi ebhalisa, okanye nakweliphi na elinye ibakala. Ukulinganisela ukusetyenziswa ngexesha langempela okanye emva kwexesha elithile. Ukulungelelanisa imihla yokubiza ngokokuqala kobhaliso, ukhetho lomthengi, okanye uninzi lweempawu ezongezelelweyo.
tags: hlawulazibaloukuthotywaukungena kwi-invovoUncedoIrhafu yexesha langempelaUkuhlawulwa rhoqoutshintsho lobulunguulawulo lomrhumoukubhaliswairhafuphuculoZuora
I-Izotope RX: Ungayisusa njani ingxolo yangasemva kwiiRekhodi zakho zeLizwi
Sep 17, 2017 ngo-11: 52 PM
Ukuhlawula kwakhona okuqhubekayo kunika isibonelelo kubabhalisi ekungafuneki ukuba bakhathazeke ngenye inyanga yetyala ukuba bahlale ngaphezulu- okanye babeke emngciphekweni wokuphoswa kukuhanjiswa kwemveliso okanye inkonzo. Endaweni yokuhlawula rhoqo, umbhalisi uqinisekisiwe ukuba unenkonzo eqhubekayo.